မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 09/01/2010 - 10/01/2010
Posted by mabaydar at 5:53 AM 15 comments :
You can hope for the better service with "Cherry May"
သားသမီး မကောင်း မိဘခေါင်း၊ တပည့်မကောင်း ဆရာခေါင်းဆိုသလိုပဲ ချယ်ရီမေရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ကျွန်မဘလော့ပေါ်ကတဆင့် ကျွန်မ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကို ကြားနာပြီးနောက် လှိုက်လှဲတဲ့ တောင်းပန်မှုကို မနေ့က ညနေက ဖုန်းမှတဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်... တဖန် ချယ်ရီမေဆိုင်ရှင်တွေရဲ့ သူငယ်ချင်းကလဲ ဘလော့ကွန်မန့်မှာ မနေ့က ညက ရှင်းလင်းချက်နှင့်တကွ တောင်းပန်သွားတာကို အားလုံးလဲ မြင်နိုင်ကြပါတယ်...
မနေ့ညက ကျွန်မအစ်မ အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့ ကျွန်မကို ပြောပါတယ်... ချယ်ရီမေမှ တာဝန်ရှိသူ ကိုSteven ဖုန်းဆက်ကာ အဖြစ်အပျက်အတွက် ၀မ်းနည်းကြောင်းနဲ့ အကျိုးအကြောင်း ရှင်းပြတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်တဲ့... အဲဒါကို ကြားရတာနဲ့တင် ကျွန်မအတွက် အတော်လေး စိတ်ပြေနေပါပြီ... ကျွန်မလိုချင်ခဲ့တာလဲ Sincere Apology ပါပဲ... ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ ဆိုင်မှာတုန်းက မရခဲ့လို့ စိတ်ထဲ အောင့်သက်သက်ဖြစ်နေတာလေးကို ကျွန်မအတွေးနဲ့တကွ ဘလော့ပေါ်မှာ ရင်ဖွင့်မိတာပါ... အဲဒိပိုစ့်ကို ရေးတုန်းက ကျွန်မဒီလို Apology ရလိမ့်မယ်လို့တောင် မမျှော်မှန်းခဲ့ပါဘူး... ခုလို တာဝန်ယူသိတတ်ပြီး လူကြီးလူကောင်းဆန်စွာ Customer ကို အလေးထား တောင်းပန်တဲ့အတွက် ချယ်ရီမေဟာ အားလုံးထက် ၁ဆင့်သာသွားပါပြီ...
ချယ်ရီမေကို မနေ့က booking လုပ်တုန်းက ကျွန်မအစ်မဖုန်းနဲ့ ခေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်... အဲဒိအချိန်ပိုင်း စားသောက်တဲ့စာရင်းနဲ့ လာသွားတဲ့ လူအုပ်စုတွေအားလုံးရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ခန့်မှန်းခြေနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ ပြန်ရှာပြီး ခုလို တကူးတကတောင်းပန်တဲ့အတွက် တောင်းပန်သူရဲ့ စိတ်ထား Sincere ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကို ကျွန်မ သံသယမဖြစ်ပါဘူး... အဲဒိမတိုင်ခင်လဲ သူ့ Staff တွေကို မနေ့က ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာ သေချာမေးမြန်းပြီး ပြဿနာကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်... ခုတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ Staff တွေကိုလဲ သိပ်အပြစ်မပြောချင်တော့ပါဘူး... ဒါပေမဲ့ နောက်တစ်ခါ ထပ်မဖြစ်အောင် ယခုကိစ္စကနေ သင်ခန်းစာယူသင့်ပါတယ်... အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကိုယ်ကိုတိုင်လဲ ကျောင်းသူဘ၀တုန်းက Part time လုပ်ခဲ့တော့ Staff တွေရဲ့ ဘ၀ကို ခက်ခဲသွားပါစေတော့ဆိုပြီး နိုင့်ထက်စီးနင်း Complain လုပ်တဲ့လူစားမျိုး မဖြစ်ချင်ပါဘူး... ဒါကြောင့်လဲ အဲဒိနေ့က အကျယ်အကျယ် ထပ်ပြောမနေတော့ပဲ ပိုကောက်တာကို မယူရင်ပဲလုံလောက်ပြီဆိုပြီး စိတ်လျော့ပြီး ပြန်လာခဲ့တာပါ... ကျွန်မရဲ့ Part Time အတွေ့အကြုံကြောင့်ပဲ Service လိုင်းမှာ ဒီလို ပြဿနာကို ဘယ်လို Handle လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို မျှော်လင့်မိတာပါ...
ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပဲ စဉ်းစား စဉ်းစား Common Sense ရှိတဲ့ Staff တစ်ယောက်အနေနဲ့ အဲဒိတုန်းက အားနာတဲ့ အပြုံးလေးနဲ့တောင် ကျွန်မတို့ကို မတောင်းပန်ခဲ့ဘူးဆိုတာကို တွေးမိတော့ ဘလော့ပေါ်မှာ ဒီ Issue ကို ချရေးပြီး ရင်ဖွင့်လိုက်တာပါ... ဟုတ်ပါတယ်... Common Sense ပါ... ဘယ်သူမဆို ကိုယ်အမှားလုပ်မိရင် အထိုက်အလျောက် ၀န်ခံရဲရတယ်... တောင်းပန်ရဲရတယ်... အဲဒါမှ တိုးတက်မှုရှိတာ... ကျွန်မလဲ အဲဒိအကျင့်ကိုရှိအောင် ကြိုးစားပြီးကျင့်သုံးနေတယ်... ချယ်ရီမေက ၀န်ထမ်းတွေလဲ ကျင့်သုံးမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်...
နောက်တော့ ကိုSteven က ကျွန်မအစ်မဆီက Apology အတွက်မေးလ်ပို့မှာမို့ မေးလ်လိပ်စာတောင်းတော့ ကျွန်မအစ်မက ကျွန်မမေးလ်လိပ်စာကိုပါ ထည့်သွင်း CC လုပ်ဖို့ ပြန်လိုက်ပါတယ်... အဲဒိမေလ်းကို စောင့်နေခဲ့လို ဒီပိုစ့်တင်တာ အနည်းငယ်နောက်ကျသွားပါတယ်... ဒါပေမဲ့ မေလ်းအစား ကိုSteven ဆီက နောက်ထပ် SMS တစ်စောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်...
နောက်ထပ် SMS ထဲမှာတော့ ကျွန်မနဲ့တကွ ကျွန်မမိဘတွေကိုလဲ ခုလို မိသားစုအပြင်သွားတဲ့နေ့မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်အတွက် တောင်းပန်ကြောင်း၊ သူ့ ၀န်ထမ်းအတွက် သူတာဝန်ယူကြောင်းပြောခဲ့တဲ့အပြင် နောင်မှာလဲ သူတို့ ၀န်ဆောင်မှုကို ဒိထက်ကောင်းအောင် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ခုလို ဝေဖန်မှုကြောင့် သူတို့အတွက်လဲ သင်ခန်းစာရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်...
ကဲ... ဒီလိုဆိုရင် ကျွန်မတို့ မြန်မာ Customer တွေအနေနဲ့ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့ Customer ကို Customer လို ဆက်ဆံတဲ့ Service မျိုးကို ပေးနိုင်တဲ့ မြန်မာဆိုင် "ချယ်ရီမေ" ဆိုတာကို မျှော်လင့်လို့ရပြီလို့ မှတ်ချက်ချမိပါတယ်... ခုလိုမျိုး Customer feedback ကို ကောင်းမွန်စွာ Handle လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ကိုSteven နှင့်တကွ တာဝန်ရှိသူများအားလုံးကို ကျွန်မ မဗေဒါက ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
အကြံပေးချင်တာက (ဆရာလုပ်တယ်လို့ မထင်စေလိုပါ... ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့သူတွေက ကိုယ့်ထက် ပိုသိတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ပါတယ်)
အခန်း ၁ခန်းဆို ၁ခန်း... ၂ခန်းဆို ၂ခန်း... Staff နာမည်တပ်ပြီးတစ်ယောက်ချင်းစီကို Assign လုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ဟိုလူလိုလို ဒီလူလိုလိုမဖြစ်တော့ပဲ ပိုပြီး organized ဖြစ်ဖြစ် serve နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်... သူတို့အတွက်လဲ သူတို့ တာဝန်ယူရတဲ့ အခန်းအတွက် Responsibility စိတ်ဓာတ်လေးလဲရှိလာနိုင်ပါတယ်... ပြီးတော့ အော်ဒါယူတာက တစ်ယောက်... ပိုက်ဆံလာယူတာက တစ်ယောက်... ကီးအင်လုပ်တာက တစ်ယောက်နဲ့ Misunderstanding ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေးနည်းသွားပါလိမ့်မယ်... အဲလို တစ်ယောက်စီ Assign လုပ်ထားပြီးမှ သိပ်အလုပ်မများတဲ့သူက အလုပ်များတဲ့သူကို လိုအပ်သလို ကူညီပေးလို့လဲရပါတယ်... (ဒီလိုကူညီပေးမှတော့ ဘာထူးမှာလဲ အရင်ကလိုပဲ တစ်ခန်းကို ဗျောက်သောက် serve နေတာနဲ့ အတူတူပဲပေါ့လို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့)... ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ခြားလူက လာကူတဲ့သူဆိုပေမဲ့ Assign လုပ်ခံထားရတဲ့သူက ဒီအခန်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တာဝန်ရှိနေတဲ့သူမို့ပါပဲ... အဲဒိအတွက် ကူပေးတဲ့ သူကလဲ အခန်းတာဝန်ရှိ Staff ကို အပြောင်းအလဲရှိရင် အသိပေးလိုက်ရုံပါပဲ... ကျွန်မတို့ Customer တွေ အနေနဲ့လဲ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဘယ်သူ့ကို ရှာရမယ်ဆိုတာ တိတိကျကျ သိနိုင်ပါတယ်... တစ်စုံ တစ်ခုဖြစ်လို့မှ "ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ"လို့ မေးလိုက်တော့မှ မျက်လုံး ပေကလပ် ပေကလပ်နဲ့ "ဟို... သူ... အင်း... မသိဘူး" ဆိုပြီး ဟိုလူ့ လက်ညှိုးထိုး ဒီလူ့လက်ညှိုးထိုး တကယ် အမှားလုပ်တဲ့ Staff က ကျတော့ ရှောင်နေ အဲလိုမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့... ကိုယ်တာဝန်ယူရတဲ့ အခန်းမှာ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ရင် ဘယ်သူ့ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ Staff က ချယ်ရီမေကို ကိုယ်စားပြုဖြေရှင်းရမှာပဲ... ဒီလိုနဲ့ မနိုင်တော့မှ Team Leader ဆိုလဲ Team Leader... Manager ဆိုလဲ မန်နေဂျာအဆင့်က ပြဿနာကို အဆင့်ဆင့်ကိုယ်တွယ်သင့်တယ်...
အဲလိုလုပ်ဖို့ အခက်အခဲတွေရှိနေတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်... လူအင်အားမလုံလောက်ဘူးဆိုတာကိုလဲ ကျွန်မ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်... အကြောင်းကြောင်းတွေရှိနေလို့ လုပ်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး... အကြံပေးယုံသက်သက်ပါ...
Posted by mabaydar at 3:44 AM 8 comments :
Photo Credit to Cherry May's Facebook
မနေ့က ကျွန်မတို့ မိသားစုအတူတူ လျှောက်လည်ရင်း အရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ ညနေရောက်တော့ ချယ်ရီမေ မြန်မာကာရာအိုကေဆိုင်မှာ သီချင်းဆိုဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်... အဲဒိမတိုင်ခင် ၃ရက်လောက်ကမှ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချယ်ရီမေကို ပထမဆုံးရောက်ဖူးခဲ့ပါတယ်... အဲဒိအတွက် ကျွန်မက recommend ပေးလို့ ကျွန်မမိသားစု တစ်ခုလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ သွားခဲ့ကြတာပါ... တစ်နေကုန်လျှောက်သွားထားကြလို့ ညနေဘက်မှာ ပင်ပန်းပြီး ဗိုက်တွေလဲဆာနေတော့ ကာရာအိုကေခန်းထဲရောက်တာနဲ့ အစားအသောက်တွေ အများကြီး ကျွန်မတို့မှာစားရင်း သီချင်းဆိုရင်း ကျွန်မတို့ရဲ့ အချိန်တွေ အကုန်မြန်ခဲ့ပါတယ်...
ကျွန်မတို့ မိသားစုအတွက်တော့ ချယ်ရီမေဖွင့်လိုက်တဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်ရမလိုတောင်ဖြစ်နေပါတယ်... ကျွန်မတို့မိသာားစု လိုအပ်သမျှအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေရာမို့ပါ... ကျွန်မတို့လဲ မြန်မာသီချင်းကို အားရပါးရဆိုနိုင်သလို... အထူးသဖြင့်တော့ ကျွန်မဖေဖေအတွက် မြန်မာ ရှေးသီချင်းတွေဆိုလို့ရသလို... မေမေအကြိုက် မြန်မာမုန့်တွေကိုလဲ အေးအေးဆေးဆေးစားလို့ရလို့ အဟုတ်ကိုပဲ နောက်လဲ ကျွန်မတို့မိသားစု ခဏခဏရောက်မဲ့နေရာလေးပါပဲ...
ဆိုင်ခန်းအပြင်အဆင် အိမ်သာ ခန်းတွင်းပစ္စည်း အားလုံးအစစအရာရာဟာလဲ စကာင်္ပူက တခြားကာရာအိုကေဆိုင်တွေနဲ့ တူတူလောက်ရှိပါတယ်... ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးလဲ လက်ခံနိုင်လောက်စရာအထိတော့ ကောင်းပါတယ် (သူတို့ဆိုင်က စားသောက်စရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မေးလိုက်တိုင်းဘာမှ တိတိကျကျ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မသိတာလောက်ကိုတော့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်)... သို့သော် ကျွန်မတို့တွေရဲ့ အမှတ်ရစရာပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့အတူ ချယ်ရီမေရဲ့ အမှတ်ရစရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုက Bill လာတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်...
ကျွန်မတို့ မိသားစု ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ အများကြီးမှာမှာ ကိုယ်မှာစားထားတာဘာတွေလဲ ဘယ်လောက်မှာစားထားလဲဆိုတာ ကောင်းကောာင်းမှတ်မိပါတယ်... ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့မိသားစုက အမြဲတမ်း အများကြီးမှာစားတတ်လို့ မှတ်မိတယ်ဆိုတာက အကျင့်ဖြစ်နေပါပြီ... ပြီးတော့ ကျွန်မတို့မိသားစုမှာ သောက်တတ်တာ ဖေဖေတစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်... ဖေဖေ့အတွက် အစက Wisky 1 Jug ဆိုလို့ ဘယ်လောက်များလဲမေးတော့လဲ ကောင်မလေးက သေချာမသိပါဘူး... ဒါပေမဲ့လဲ မှာလိုက်ပါတယ်... Wisky 1 Jug နဲ့ ဘီယာ ၁ Jar မှာပါတယ်...
Menu ပေါ်မှာ Tiger Beer 1 Jar S$20 လို့ရေးထားပါတယ်... Wisky 1 Jug ကို ၂၄ဒေါ်လာပါ... (၁ jug မှာ ၄ ပတ်ပါတယ်လို့ နောက်မှဆိုင်ကကောင်မလေးအပြောအရသိရပါတယ်... ၄ ပတ်ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ သောက်တဲ့သူအသိဆုံးဖြစ်မှာပါ.. ကျွန်မကတော့ ရေခဲတွေတော်တော်များတာတော့ သတိထားမိပါတယ်... ဒါတွေထားပါတော့ ခုက သူတို့ဆိုင်က အစားအသောက် ၀န်ဆောင်မှုကို ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး... စားစရာတွေကတော့ မဆိုးပါဘူး အရသာကောင်းပါတယ်... )
ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းဘေလ်လာတော့ ကျွန်မတို့မှာထားတာတွေထက် အရေအတွက်တွေပိုနေတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်... မှားတာလဲ သူတို့အတွက်တော့ အမှားကောင်းလေးပါ... ဈေးများတဲ့ ဘီယာကိုမှ ၁ ဂျားကနေ ၂ဂျားစာလာကောက်ထားပါတယ်... နောက်တော့ ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မမေမေစားတဲ့ လက်ဘက်ထမင်းကိုလဲ ၂ပွဲကနေ ၃ပွဲလုပ်ထားပါတယ်... ပြီးတော့ ဘီယာက မန်နျူးပေါ်မှာ ၂၀ ဆိုပြီး တကယ်တမ်းကျတော့ ၂၂ဒေါ်လာ ယူထားပါတယ်... အဲဒါကို မေးတော့ သူက Menu ပေါ်က Tiger Beer ကိုပြောတာဖြစ်ပြီး တကယ်တမ်းကျတော့ Tiger မရှိလို့ Heineken Beer ကို ထည့်လိုက်ကြောင်း အဲဒိအတွက် ၂ဒေါ်လာပိုကြောင်းပြောပါတယ်... ကျွန်မခုထောက်ပြလိုတာက ပိုက်ဆံ ၂ဒေါ်လာ ကွာဟချက်မဟုတ်ပါဘူး... အားလုံးလဲ ကျွန်မတို့ Customer တွေဘက်က ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြုံဖူးရင်သိနိုင်ကြသလို... သူတို့ ဆိုင်သမားတွေဘက်က အဲလို အချိန်မှာ ဘယ်လို Action မျိုးယူသင့်လဲဆိုတာကိုလဲ သိသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်... Basic customer service ပါ...
၁ အချက် Menu ပေါ်မှာ Tiger Beer တစ်ခုထဲကိုသာရေးထားပြီး Heineken Beer ဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး... တကယ်လို့ သူတို့ဆိုင်မှာလဲ ရောင်းတယ်... ဈေးလဲမတူဘူးဆိုရင် မန်နျူးပေါ်မှာ ဖော်ပြပေးသင့်ပါတယ်...
၂ အချက် တကယ်လို့ Customer မှာတဲ့ Item မရှိဘူးဆိုရင် (ဈေးတူတာ မတူတာ အပထားအုံး)... Customer Preference အရ လာရောက်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်... "Tiger Beer ကတော့ ဒီနေ့ကုန်နေလို့.. Heineken နဲ့ အစားထိုးလို့ရမလား" လို့ အသိပေးသင့်ပါတယ်...
၃အချက်ကတော့ အထူးသဖြင့် ဈေးမတူတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း ၂မျိုးကို Customer ကို အသိမပေးပဲ ယခုလိုပဲ သူတို့ဘာသာ သူတို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး Serve လိုက်သင့်ပါလား...
အပေါ်က သုံးချက်ကတော့ Brand မတူ ဈေးမတူတဲ့ ကုန်ပစ္စည်း ၂ မျိုးကို Customer ကို အသိမပေးပဲ လုပ်ချင်တာလုပ်တဲ့အပေါ် ကျွန်မရဲ့ ဖြစ်သင့်တယ်ထင်တဲ့ အကြံပြုချက်ပါ...
ခု ဆက်လက်ပြီး အကြံပြုချင်တာကတော့ မှာထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ အရေအတွက် Bill ပေါ်မှာ တိုးနေတာကိုပါ... ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ မြန်မာဆိုင်ကို ၁ခါသွား ၁ခါဖြစ်တဲ့အတွက် "တိုက်ဆိုင်လိုက်တာများကွာ" လို့တောင် ပြောရမလိုဖြစ်နေပါပြီ... ဘီယာဈေးက Menu ပေါ်ကနဲ့ ကွာရုံတင်မကဘူး ၁ဂျားကို ၂ဂျား လုပ်ထားတော့ ဈေးက ကျွန်မတို့သိထားတာထက် ၂ဆတောင်မကတော့ပါဘူး... (ဈေးအကြီးဆုံး ဘီယာ Item ကမှ တိုးနေတဲ့အတွက် စဉ်းစားစရာတော့ ကောင်းလှပါတယ်)... လက်ဘက်ထမင်းကလဲ ၂ပွဲတောင်မကုန်တာ ၃ပွဲလုပ်ထားလို့ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်...
ဒီတော့ ကျွန်မတို့က ဒါတွေ ဒါတွေကတော့ ပို Charge ထားတယ်လို့ ဘေလ်လာပေးတဲ့ ကောင်းမလေးကို ပြောတော့...
သူ့ဘက်ကလဲ surprise ဖြစ်ပုံမရပါဘူး... အေးဆေးပဲပြီးသွားပါတယ်... ကျွန်မက အစက အတော်လေးတောင် ငြင်းရတော့မယ်ထင်လိုက်တာပါ... (ဒါကိုပဲ Service ကောင်းတယ်လို့ ယူဆချင်သေးလား)..
တကယ်လို့ သူတို့ဘက်က ကျွန်မတို့ ဘီယာ ၂ဂျားမှာတယ်လို့ အမှတ်မှားရိုးမှန်ရင်... ပုံမှန်ဆိုင်သမားတွေရဲ့ Reaction က ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ထင်ပါသလဲ... ကျွန်မ စိတ်ကူးကြည့်မိတာ အနည်းနဲ့ အများတော့ ကျွန်မတို့ကို "ပြန်စစ်ကြည့်ပါရစေ" ဘာညာဆိုပြီးထပ်သွားစစ်မယ်... ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မတို့ကို အနည်းနဲ့အများပြန်ငြင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့က ဘေလ်ကို စစ်လိုက်ပြီး ဘီယာက ၁ဂျားပိုတယ် လက်ဘက်ထမင်းက တစ်ပွဲပိုကောက်ထားတယ်လို့ ပြောလိုက်ရုံနဲ့... ဆိုင်က ကောာင်မလေးဘက်က "အော်" ဆိုပြီး တစ်လုံးတည်းနဲ့ ပြီးသွားတဲ့အတွက် သာမာန် reaction မျိုးမဟုတ်ပဲ ကြိုတင်သိနေတဲ့ ပုံစံမျိုးလို့ ကျွန်မဘက်က ခံစားရပါတယ်... (ဟုတ်ချင်မှလဲဟုတ်မှာပါ...) ဟုတ်တာ မဟုတ်တာကတော့ ကာယကံရှင် အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ... ကျွန်မဘက်ကလဲ ကျွန်မခံစားရသလို Customer ဘက်က ဖော်ပြတာပါ...
အဲဒိနောက်တော့ စာဖတ်သူတို့သာ Customer ဆိုရင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုမျိုးကို ဆက်ပြီး မျှော်လင့်မလဲ... Apologies ပါ... ကျွန်တော်/ကျွန်မတို့ ဘေလ်ပိုတောင်းမိတဲ့အတွက် Sorry ပါပဲဆိုတဲ့ စကားလေး တစ်လုံးကို Sincere ဖြစ်တဲ့ပုံမျိုးလေးနဲ့ ပြောလိုက်ရင်တောင် ကျွန်မတို့ ကျေနပ်သွားမှာပါ... ၁ခါလာ ၁ခါဒါမျိုးကြုံလိုက်ရပင်မဲ့ "အော်... ဖြစ်တတ်ပါတယ်လေ" ဆိုပြီးတော့ပဲ ပြည်ဗုံးကားချလိုက်မိပြီး ခုလို ဘလော့ပေါ်ကို ရောက်လာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး... ဒါပေမဲ့ သူတို့အားလုံးက သူတို့အပြစ်ကို လုံးဝ ၀န်ခံတဲ့ အပြုအမူမရှိပါဘူး... ဒါမှမဟုတ် "ဘေလ် Key လုပ်တာ ငါမဟုတ်တော့ ငါ့အပြစ်မဟုတ်ဘူး" အော်ဒါယူတာက တစ်ယောက်... ဘေလ်ကီးတာက တစ်ယောက်... ဘေလ်လာယူတာကတစ်ယောက်မို့... ဘေလ် လာယူတဲ့သူက သူ့အပြစ်မဟုတ်လို့ တောင်းပန်စရာမလိုဘူးလို့ ယူဆတာလား... ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ Customer နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ သူက ဆိုင်မှာရှိတဲ့သူတွေကို Represent လုပ်တယ်လို့ ကျွန်မကတော့ ယူဆတယ်... ဒိအတွက် Sorry ဆိုတာလောက်တော့ သူပြောသင့်တယ်လို့ ကျွန်မဆုံးဖြတ်ရင် ကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်ကို မှားတယ်လို့ပြောနိုင်မလား... အဲလိုမဟုတ်ပဲ (ဘီယာ ၂၄ဒေါ်လာ + လက်ဖက်ထမင်း ၄ဒေါ်လာ = ၂၈ ဒေါ်လာ) ပိုကောက်ပြီး သူတို့ဘက်က ဘာမှမဖြစ်တဲ့ ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ ဆက်ဆံခံလိုက်ရတာကတော့ Customer လဲဖြစ်ဖူးတယ်... အဲလိုမျိုးလဲ ဆက်ဆံခံရဖူးတဲ့ သူတွေသိမှာပါ... (ဘီယာဖိုး Menu နဲ့ မတူတာကိုတော့ ၂ကျပ်ထဲမို့ ပြောချင်စိတ်မရှိတော့လို့ ပေးလိုက်တယ်)
အဲဒိဆိုင်က ပြန်တော့ စိတ်ထဲ ခုလု ခုလုဖြစ်နေတဲ့အပြင်... ကျွန်မခေါင်းထဲ အတွေးတွေနဲ့ စဉ်းစားနေမိတယ်...
မြန်မာဆိုင်ဆိုပြီး အားပေးကြလို့ မြန်မာ Customer ဆိုပြီး ဒီလို service မျိုးပဲပေးတာလား...
ဒါမှမဟုတ် မြန်မာဆိုင်လာပြီး ဘယ်လို Customer Service မျိုးကို မျှော်ကိုးနေသေးလဲလို့ အပြစ်တင်ရင်လဲ ခံရမှာပဲ...
မင်းတို့ ငါတို့ဆိုင်နဲ့ ကင်းနိုင်လို့လား ငါတို့ဆိုင်က စကာင်္ပူမှာ ၁ဆိုင်ထဲရှိတဲ့ မြန်မာကာရာအိုကေဆိုင် လို့များ စိတ်ထဲကြွေးကြော်နေမလာား...
မင်းတို့ ငါတို့ဆိုင်နောက်မလာလို့လဲ ကိစ္စမရှိဘူး ငါတို့ဆိုင်မှာ လူတွေနေ့တိုင်းပြည့်လို့ သီချင်းဆိုဖို့ booking လုပ်ရတယ်... အချိန် Extend တိုးချင်လို့တောင်မရဘူး နောက်လူစောင့်နေရတဲ့အထိ ရောင်းကောင်းတယ်လို့များ မထိမဲ့မြင် အပြုံးပြုံးနေမလား...
ဒါပေမဲ့ အဲဒါမျိုးအတွေးမျိုးကို အဲဒိ ဆိုင်သားတွေ တွေးချင်တွေးမယ် ဆိုင်ရှင်ကတော့မတွေးလောက်ဘူး (သူ့အကျိုးအတွက် တွေးလဲ မတွေးသင့်ဘူး) လို့ ကျွန်မထင်တာပါပဲ... ဆိုင်ရှင်တွေက လူငယ်တွေစုပြီး ဖွင့်ထားတယ်လို့လဲ ကြားပါတယ်... ဒီလိုဆိုတော့ ကျွန်မအနေနဲ့ သူတို့ ဒီလိုတွေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ယုံကြည်လို့ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်... သူတို့ဒီဆိုင်ကိုဖွင့်တာ စီးပွားရေးသက်သက်အပြင် သီချင်းကြိုက်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် လိုအပ်ချက်လေးကို ဖြည့်စွက်ပေးချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါမယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်... လူငယ်တွေဦးစီးတယ်ဆိုတော့ စီးတီးဟောက ဆက်ဆံရေးပျက်စီးပြီးသား တခြားမြန်မာဆိုင်တွေနဲ့မတူ ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီး Best customer service ပေးမယ်လို့လဲ သူတို့ စိတ်ကူးခဲ့မယ်ထင်ပါတယ်... ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဆိုင်ရှင်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေး စတင်ပျက်စီးစပြုနေပြီလို့ သတိပေးပါရစေ...
ကျွန်မအရင်ကပြောဖူးသလို ရောင်းချသူရဲ့ စေတနာဟာ စားသုံးသူအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ... ဒီလိုမျိုး Service နဲ့ Treatment တွေကို မပြင်ဘူးဆိုရင်ဖြင့် ချယ်ရီမေရဲ့ နာမည် ကြာရှည်ခံမခံကို သံသယဖြစ်မိပါတယ်... စီးတီးဟောပေါ်က မြန်မာဆိုင်တွေဆက်ဆံရေးမကောင်းခဲ့လို့ တစ်ဆိုင်မကောင်း နောက်တစ်ဆိုင် ပြောင်းထိုင်ပါတယ်... နည်းနည်းစိတ်ဆိုးရင် ၁လလောက် လုံးဝမစားပါဘူး... (တစ်ဆိုင်ကိုတော့ ဆက်ဆံရေးကြောင့် လုံးဝ ဘမ်းထားပါတယ်)... ချယ်ရီမေကိုတော့ ဒီတစ်ကြိမ်အမှားအတွက် Bad Impression ဖြစ်သွားပင်မဲ့ ကျွန်မဘက်က အခွင့်အရေးပေးတဲ့အနေနဲ့ စိတ်ရှိရင် ရှိသလို လာချင်လာနေအုံးမှာပါ (၁ဆိုင်တည်းရှိတာကိုး... ဒါတောင် ကျွန်မ မိသားစုဝင်တွေက နောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားမသွားတော့ အာမ မခံပါဘူး)... အဲနောက်တစ်ခါလာရင်လဲ ဘေလ်ကို သေချာစွာစစ်ဆေးဖို့လဲ ပြင်ဆင်လာမှာပါ... ဒါပေမဲ့ နောက်အကြိမ်တွေထပ်လာလို့ တိုးတက်မှုမရှိပဲ ဆုတ်ယုတ်လာတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မဘမ်းစာရင်းထဲ ထည့်သင့်ရင်ထည့်မှာပါပဲ... ကော်ပီသီချင်းဆိုတဲ့ မြန်မာအဆိုတော်တွေကို ဒီတစ်ကြိမ်ကျေးဇူးတင်တာက အင်္ဂလိပ်ကာရာအိုကေဆိုင်သွားလဲ မြန်မာစာသား ကိုယ့်ဘာကိုယ် ထည့်ပြီးဆိုလို့ရနေတုန်းပါပဲ...
ခါချင်ကောင် မာန်တင်းလို့ တောင်ကြီးကို ဖြိုနိုင်မယ်ထင်လာဆိုပြီးများ မဲ့ပြုံးပြုံးနေပြီလား... ခါချင်ကောင် ၁ကောင်တည်းတော့ တောင်ကြီးကို မဖြိုနိုင်ပင်မဲ့ ခါချင်ကောင်တွေအများကြီးဆိုရင်တော့ တောင်ကြီးကိုမြိုရင်တောင် မြိုနိုင်မှာပါ... တောင်နဲ့ အပြိုင် ခါချင်ဗို့ကြီးတောင် လိုက်ဆောက်နိုင်ရင်ဆောက်နိုင်မှာပါ... Customer တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းကို ဒီလို Service မျိုးပေးတာများလို့ ခံရတဲ့သူများလာရင် ၁ယောက်... ၁ယောက်နဲ့ အပျက်အပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်မှာ စိုးလို့ပါ... တကယ်လို့ အပြိုင်နောက်တစ်ဆိုင်တစ်ချိန်ရှိလာမယ်... Service ကလဲ ကောင်းမယ်ဆိုရင်... ကျွန်မလို လူမျိုးအတွက်ကတော့ အစားအသောက်မကောင်းအုံးတော့ ယှဉ်လာရင် အဲဒိပဲသွားဖြစ်မှာပါ...
ဒီတော့ ကျွန်မတို့တွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်အတိုင်း စကာင်္ပူမှာရှိတဲ့ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်း မြန်မာဆိုင်တွေထဲမှာ နိုင်ငံတကာဆိုင်တွေလို Service ကောင်းကောင်း အဆင့်မှီမှီနဲ့ရှိတာ ချယ်ရီမေဟေ့ လို့ ခေါင်းမော်ပြီး ပြောနိုင်တဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိအောင် ကြိုးစားပြီး ထိမ်းသိမ်းပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်... အဲဒိဆိုင်တိုးတက်မှုက ကျွန်မအတွက် ဘာအကျိုးအမြတ်မှမရှိပါဘူး... ဆိုင်ပိုင်ရှင်ပဲ တိုးတက်မှာပါ... အနည်းဆုံး မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်ခြားလူမျိုးတွေကို ဂုဏ်ယူစွာခေါ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုင်မျိုးရှိရင် ကျွန်မကျေနပ်ပါပြီ...
ချယ်ရီမေ တိုးတက်မှုကို လိုလားတဲ့
P.S No ill or other intention . It's justacustomer feedback
Posted by mabaydar at 9:02 AM 12 comments :
Inspirational Hindi Movie "3 Idiots" - Recommendation
ကျွန်မတို့အခေါ် ကုလားကားပေါ့နော်... ဒါပေမဲ့ တိတိကျကျခေါ်ရင်တော့ ဟင်ဒီကား... တော်ရုံတန်ရုံ ဟင်ဒီကားလို့ပြောလိုက်ရင် ကြည့်နေကျမဟုတ်သူ တော်တော်များများက "ဟင်"ကနဲဖြစ်တတ်ကြတယ်... ကုလားကားက ကမယ် ဆိုမယ် ၀မ်းနည်းလဲက ပျော်လဲက လို့ ဝေဖန်တတ်ကြတယ်... ဟုတ်ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ သူတို့မှာလဲ သူတို့ ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ မူနဲ့ သူတို့ အဆင့်ရှိတယ်... English ကားတွေမှာတောင် Musical movie ဆိုပြီး သီးသန့်တောင် ကြည့်ကြသေးတာ... ဟင်ဒီကားတွေမှာ သီချင်းဆိုတာ ကတာကို ဘာလို့ အပြစ်တင်ချင်ကြတာလဲ... ရုပ်ရှင်ကို ရုပ်ရှင်လိုနားလည်ပြီးကြည့်လိုက်ရင် အရသာရှိမှာပါ... ကျွန်မကတော့ ဟင်ဒီကားတွေကို ကြိုက်တဲ့အချက်ထဲမှာ အကအခုံ သီချင်းတွေပါလို့လဲပါတယ်... Hollywood နဲ့ အပြိုင် Bollywood ကိုတောင် တည်ထောင်ပြီး အော်စကာတွေဆွတ်ခူးနေတာလဲ သူတို့ရိုက်တဲ့ကားတွေချည်းပဲ... သူတို့ဟာ အနုပညာလောကထဲမှာ အဆင့်အတန်းရှိရှိနဲ့ကို ရပ်တည်နေတာ... ဒီတော့ ပြောချင်တာ ဟင်ဒီကား (ကုလားကား) ဆိုလို့ အထင်မသေးပဲ ကြည့်ကြည့်စေချင်တယ်...
ကျွန်မ Recommend ပေးချင်တဲ့ ကားလေးကတော့ မင်းသားချော Aamir Khan နဲ့ မင်းသမီးချော Kareena Kapoor တို့က ခေါင်းဆောင် ပါဝင်ထားပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ဒီကားမှာ မင်းသားနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း ၂ယောက်ဇာတ်လမ်းက ပိုပြီး အဓိကကျပါတယ်... မင်းသမီးတောင် သိပ်တော့ အဓိကမကျလှပါဘူး...
အန္ဒိယထိပ်သီး အင်ဂျင်နီယားရင်းကျောင်းမှာ အများတကာနဲ့မတူပဲ ထူးခြားတဲ့ Personality ရှိတဲ့ Rancho ဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ Faran နဲ့ Raju ၂ယောက်က ကျောင်းပြီးသွားတော့ အဆက်အသွယ်ပျက် လုံးဝပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ သူတို့ သူငယ်ချင်း Rancho ကို ပြန်လိုက်ရှာရင်း ဇာတ်ကြောင်းပြန်တာကို အခြေခံထားပါတယ်...
Rancho ဟာ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကို အလွန်စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ပြီး သူယုံကြည်ရာကို ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ဦးတည်ချက်မပျက်ပဲဆောင်ရွက်နိုင်တယ်... သူများတွေက စာမေးပွဲအမှတ်ကောင်းမှ အလုပ်ကောင်းကောင်းရမယ်ဆိုပြီး ပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ သူကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ပဲ သူလေ့လာချင်တာကိုပဲလေ့လာနေတတ်တဲ့ လူစားမျိုး... သူဟာ စာအုပ်ထဲက သင်ရိုးတွေကို နှုတ်တိုက်မကျက်ပဲ သဘောတရားကို တကယ်လေ့လာ နားလည်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် အများနဲ့ယှဉ်ရင်တော့ တမူကွဲပြားနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်... အဲဒိအတွက်လဲ သူ ဘယ်သူကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူး... ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ မထိခိုက်ဘူးလေ... သူ့အထင်အမြင်တွေကို ရဲရဲတင်းတင်း ချက်နဲ့လက်နဲ့ ပြန်ပြောရဲတဲ့အတွက် ဆရာတွေက မျက်မုန်းကျိုးတဲ့အပြင် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးနဲ့လဲ အမြဲတမ်း ပြဿနာတတ်နေခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်...
လူငယ်ပီပီ လှောင်တယ် ပြောင်တယ် ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်... သူ့နဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Fahan နဲ့ Raju တို့ရဲ့ မိသားစု တွေကတော့ သူ့မိသားစုလောက် မချမ်းသာဘူး... သူတို့သားတွေကို အင်ဂျင်နီယာဖြစ်စေချင်လွန်းလို့သာ ရှိစုမဲ့စုနဲ့ ကျောင်းထားရတာဖြစ်တယ်... သူတို့သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်း အနည်းကျဉ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
Fahan မိသားစုက သာမာန်လူတန်းစားဖြစ်တယ်... သူမွေးလာကတည်းက မိဘတွေက သူ့ကို အင်ဂျင်နီယာလုပ်ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ သူ့ခမျာ ရွေးစရာလမ်းမရှိပဲ မိဘဆုံးဖြတ်တာကို လိုက်နာခဲ့သူဖြစ်တယ်... သူတကယ်ဝါသနာပါတာကတော့ wildlife photographer ဖြစ်တယ်... သူ့ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံးဟာ Rancho နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ လုံးဝပြောင်းလဲခဲ့တယ်...
Raju မိသားစုက အရမ်းဆင်းရဲတယ်... သူ့အဖေက လေဖြတ်နေတဲ့ရောဂါသည်... အမေက ဆရာမဟောင်း.. ပိုက်ဆံမရှိလို့ ညီမကလဲ ယောကျာင်္းတင်တောင်းစရာမရှိလို့ အိမ်ထောင်မပြုရဘူး (သူတို့ လူမျိုးရိုးရာအရ မိန်းကလေးက တင်တောင်းရတယ်ဆိုတာကို လေ့လာမှတ်သားရတယ်)... သူကတော့ အင်ဂျင်နီယာကို ၀ါသနာပါတယ်... သူ့မိသားစု ငွေရေးကြေးရေးကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ ကျောင်းအုပ်ကြီးချိန်းခြောက်ရင် အမြဲကြောက်ရတဲ့သူ... သူငယ်ချင်း တစ်ဖက် ကျောင်းအုပ်ကြီးတဖက်ကြားမှာ သနားစရာအကောင်းဆုံးသူဖြစ်တယ်... သူ့ဘ၀ သူ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ သူ့ကြောက်စိတ်တွေဟာလဲ Rancho နဲ့ အတွေ့မှာ အားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိလာတယ်...
Rancho နဲ့ပေါင်းလို့ သူတို့ ၂ယောက် grade တွေကျလာလို့ ကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့ ခြိမ်ခြောက် အထင်သေးမှုကို ခံရပင်မဲ့ အချိန်တန် စာမေးပွဲ အဖြေထွက်ရင် Rancho ကတော့ အမြဲ ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေတတ်တဲ့အတွက် မျက်မုန်းကျိုးသော်လည်း ကျောင်းအုပ်ကြီးမှာ လက်မှိုင်ချနေရတယ်... သူ့အတွက် အဆိုးဆုံးကတော့ သူ့သမီး ဆရာဝန်မလေးနဲ့ Rancho ရဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါပဲ...
ဒါပေမဲ့ ကျောင်း graduate ဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီး လုံးဝပျောက်ဆုံး အဆက်သွယ်ဖြတ်သွားတဲ့ Rancho ကို အားလုံးစဉ်းစားမရဖြစ်ပြီး တွေ့ချင်နေကြတယ်... Rancho ရဲ့ ဘ၀အစစ်က ဘာလဲ... သူတို့သိခဲ့တဲ့ Rancho ဆိုတာ တကယ့်အစစ်အနေနဲ့ တည်ရှိခဲ့ရဲ့လား....သူဘာလို့ပျောက်ဆုံးသွားတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ဆက်လက်ရှူစားကြပါ...
ဒီရုပ်ရှင်လေးက လူတွေကို ခံစားချက်တွေ များစွာပေးသလို သင်ခန်းစာတွေလဲ အများကြီးပေးတယ်လို့ ကျွန်မခံစားရတယ်... ကြိုးစားချင်စိတ်နဲ့ အသိဥာဏ်တွေလဲ ပေးတယ်... ကျောင်းသားဘ၀တွေကို ရိုက်ထားတဲ့အတွက် ရီလဲရီရတယ်... သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးကိုလဲ အနည်းအကျဉ်း အတွေးစလေးပေးခဲ့တယ်...
အဓိက သူပေးချင်တဲ့ သင်ခန်းစာလေးတွေကတော့ ... လူဆိုတာ Degree ရမှ အလုပ်ကောင်းကောင်းရမယ်... အလုပ်ကောင်းကောင်းရမှ လူဝင်ဆံ့မယ်ဆိုပြီး ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် Degree တစ်ခုကို အရယူတတ်ကြတယ်... ဒါပေမဲ့ တကယ်ဖြစ်သင့်တာကတော့ ဘာလို့ ကျောင်းတက်လဲ ပညာရပ်တွေကို တတ်ချင်လို့ သိချင်လို့ ၀ါသနာပါလို့ ဆိုတာ ဖြစ်သင့်တယ်... Grade ကောင်းဖို့ထက် တကယ်တတ်အောင် လေ့လာသင်ယူသင့်တယ်... ဆရာတွေကလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်း စိတ်ထားမျိုးနဲ့ တပည့်တွေကို သင်ပေးသင့်တယ်...
အဲဒိကားထဲက ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့ ပညာရေးစနစ်ပေါ် အတွေးအခေါ်နဲ့ Rancho ရဲ့ အတွေးအခေါ်က လုံးဝကိုကွာခြားတယ်... လူဆိုတာ ကိုယ်ဝါသနာပါတာ စိတ်ဝင်စားတာကိုလုပ်ရင် ပိုအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်အောင် ပြသွားတယ်...
အဲဒိကားမှာ Wildlife photographer ဖြစ်ချင်တဲ့ Fahan သူ့အဖေကို နှစ်သိမ့်တဲ့အခန်းမှာပြောတဲ့စကားတွေက ကျွန်မ အတွေးနဲ့ အတော်တူတယ်... သူ့အဖေကပြောတယ်... အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှ ၀င်ငွေကောင်းမယ် လူဝင်ဆံ့မယ် တောထဲမှာ wildlife photographer လုပ်ရင် အနေဆင်းရဲ အစားဆင်းရဲနဲ့ ပိုက်ဆံလဲ ဒီလောက်မရဘူးလို့ပြောတယ်... ဒီအခါမှာ Fahan က Wildlife Photographer လုပ်ရင် ပိုက်ဆံနည်းနည်းပဲရမယ် အိမ်သေးသေးပဲပိုင်မယ် ကားသေးသေးပဲပိုင်မယ်... ဒါပေမဲ့ သူအရမ်းပျော်မယ် စိတ်ချမ်းသာမယ်လို့ သူ့မိဘကို သေချာရှင်းပြခဲ့တယ်... (အဲဒါပဲ... ကျွန်မလဲ အဲလိုအတွေးမျိူးရှိတယ်... ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရပြီး ပျော်ရွှင်မှုမရှိတဲ့ အလုပ်ကို ဘာလို့လုပ်မှာလဲ... ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို ကိုယ်စိတ်ပါတာကိုပြောတာ... အဲဒိအတွေးကျွန်မမှာရှိနေတာ ကျောင်းပြီးပြီး အလုပ်ခွင်ထဲစ၀င်တည်းကပဲ... ဒါပေမဲ့ ကျွန်မမှာ Fahan လို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ချင်တဲ့ လုပ်ရဲတဲ့ courage မရှိဘူး... ခုတစ်လောတော့ ကျွန်မ Flim production ကို စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်တယ်... ဒါပေမဲ့ တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးတော့ ကျွန်မမှာ Talent ရှိမရှိမသိဘူး... လိုင်းကို လုံးဝပြောင်းလိုက်ရမဲ့ Risk ကိုလဲ ကျွန်မကြောက်တယ်... ဒါပေမဲ့ ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ် ကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်... သေချာတာတော့ ကျွန်မလက်ရှိနေရာကို မကြိုက်ဘူး... ရုပ်ရှင်အကြောင်းပြောရင်း ကိုယ့်အကြောင်းပြောတာ များသွားပြီ... Let's back to the topic)
ဒီရုပ်ရှင်လေးမှာ ကိုယ်စိတ်ဝင်စား ၀ါသနာပါတဲ့ ပညာရပ်ကို လိုက်စားရင် အောင်မြင်တာထက် ကျော်လွန်တာတွေကို ရရှိနိုင်ကြောင်း အသိဥာဏ်ဖွင့်ပေးတယ်...
ဒီရုပ်ရှင်လေးဟာ (ငယ်ငယ်က မြန်မာစာသင်တုန်းကလို ဘာရသတွေပေးလဲလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်) ဟာသရသ၊ ဂရုဏာရသတွေပေးတဲ့အပြင် သင်ခန်းစာတွေ အမျာကြီးယူလို့ရမဲ့ကားလေးဖြစ်တယ်..
ဒါတွေတင်မကဘူး အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ လှပတဲ့ ရှုခင်းတွေကိုလဲ မြင်နိုင်တယ်... ကျွန်မတောင် အိန္ဒိယကို အလည်သွားချင်စိတ်ပေါက်သွားပါတယ်... ရိုက်ကွင်း ရိုက်ချက်နဲ့ ကင်မရာ အယူအဆကတော့ ပြောစရာမလိုလောက်အောင်ကို ကောင်းတယ်...
မင်းသားကလဲ သူ့အပြင်က အသက်ကိုတောင် မေ့လောက်အောင် နုတယ်... အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်မ ဟင်ဒီကားတွေကြည့်ရင် မင်းသား နှုတ်ခမ်းမွှေးပါရင် မကြိုက်ဘူး... အဲဒိအတွက် ကျွန်မအကြိုက်မင်းသားတွေကတော့ ရှာရွတ်ခမ်း၊ ဆယ်လ်မန်ခမ်း၊ အာမေလ်ခမ်းနဲ့ နောက်တစ်ယောက်က သူတို့နောက်မှပေါ်တာပဲ ဗလကောင်းကောင်းပဲ bollywood မင်းသား (စကာင်္ပူတောင် တစ်ခါလာဖူးတယ်) နာမည်မသိဘူး နှုတ်ခမ်းမွှေးတော့ မပါဘူး... (kabhi kushi kabhi gham အဲဒိကားမှာ အငယ်ကောင်လုပ်တာ) သူတို့တွေကို သဘောကျတယ်... မင်းသမီးတွေကတော့ ပြောနေစရာမလိုဘူး... ဟင်ဒီမင်းသမီး အားလုံးနီးပါးချောကြတယ်... အားလုံးနည်းပါးကြိုက်တယ်...
ကဲပါ အပြောတွေများနေပြီ... အားလုံးကို ပြချင်လွန်းလို့ လိုက်ရှာရင်း ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ Youtube ပေါ်မှာ အင်္ဂလိပ်စာတမ်းထိုးနဲ့တွေ့တယ်... ကြည့်သွားကြနော်... တကယ်ကောင်းတယ်...
P.S တချို့အပိုင်းတွေရဲ့ အစမှာ google က ကြော်ငြာတွေဝင်ထားတယ်.. ၃၀ စက္ကန့်လောက်.... ခဏစောင့်လိုက်လို့ အဲဒိကြော်ငြာပြီးရင် ရုပ်ရှင်လာလိမ့်မယ်...
All videos Credit goes to Youtube's IDIOTSatSominalTv channel...
Posted by mabaydar at 7:48 AM 18 comments :
Labels: ရုပ်ရှင် , ဝေဖန်ရေး
SNSD, BIG BANG, SHINee, Infinite, FT Island
အဲဒိနေ့က အလုပ်ကပြန်လာပြီး တစ်နေကုန်အိပ်တယ်... နောက်နေ့မနက် ၉နာရီခွဲကျရင် ကိုရီးယားအဆိုတော်အဖွဲ့ ၆ဖွဲ့လာမဲ့ ရှိုးပွဲ လက်မှတ်ကို သွားတန်းစီဖို့ အားလိုတယ်လေ... လာမဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာ ကိုယ်အကြိုက်ဆုံး Big Bang အဖွဲ့ပါတော့ ဘယ်လောက်ဈေးကြီးကြီး VIP လက်မှတ်ကို ရအောင်ဝယ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်... ဒါပေမဲ့ ကျန်တဲ့ ၅ဖွဲ့ (SNSD, SHINee, FT Island, Infinite, D-NA) နဲ့ ရောပြီး အချိန်မျှကြည့်ရမယ်ဆိုလို့တော့ စိတ်ထဲ သိပ်ဘ၀င်မကျခဲ့ဘူး... ဒါတောင် အွန်လိုင်းက ၀က်ဆိုဒ်ပေါ်မှာ အဲဒိ VIP လက်မှတ် S$258 တန်ကို ၀ယ်ချင်တဲ့သူချည်းပဲ ကိုယ့်ပြိုင်ဘက်ကများမှန်းသိတော့ ကိုယ့်ဘက်ကလဲ ပြင်ဆင်ထားရမယ်လေ...
"Cover Shoe စီးပြီး သွားရမယ်... ဒါမှ လူတိုးရင်း တက်နင်းခံရရင် ခြေထောက်မနာအောင်ရယ်... အကြာကြီးရပ်စောင့်ရရင်လဲ ခြေထောက်မနာအောင်... ပြေးရလွှားရလဲလွယ်အောင်...
ရေဘူးသေးသေးလေးလဲစောင်သွားမယ်... ဒါမှ ရေငတ်ရင် တန်းစီနေရာကနေ ထွက်စရာမလိုပဲ အသင့်သောက်လို့ရအောင်... ဒါပေမဲ့ အများကြီးသောက်လို့ အပေါ့သွားချင်မှာစိုးလို့ အများကြီးလဲ မသောက်ဖြစ်အောင်နေရမယ်..."
မနက် ၄နာရီ အိပ်ယာနိုးတော့ နောက်ဖေးသွားမွှေနောက်ပြီး မနေ့ကကျန်တဲ့ ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကို တစ်ယောက်ထဲ ကစ်လိုက်သေးတယ်... တိုးရမယ်ဆိုတော့ အားရှိမှဖြစ်မယ်လေ... ပြီးတော့ ဘယ်အချိန်ထိတန်းစီရမယ်မှန်းသိတာမဟုတ်ဘူး... ဒီတော့ ဗိုက်ဖြည့်သွားမှဖြစ်မယ်... စားနေရင်း အွန်လိုင်းက သူတို့ ဖေ့ဘွတ်ဆိုဒ်ကို စစ်ကြည့်လိုက်တော့ အလွန်တရာမှ ဒေါသဖြစ်စရာ.. မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပြောင်းလဲကြေငြာချက်တစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရတော့ သွေးကြွပ်ကြွပ်ဆူသွားတယ်...
"ဘာ!!!!!!!!!!!!!!!... ဘာတဲ့ ?"
"Due to the public safety and complain from other shop inside the mall. We allowed to start Queue at mid night 12 o'clock" တဲ့... လောကမှာ ဘာက မုန်းစရာအကောင်းဆုံးလဲသိလား... ကတိမတည်တဲ့သူတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ မုန်းစရာအကောင်းဆုံးပဲ... ၁ဦး၁ယောက်ချင်းဆိုရင်တော့ ကျွန်မဒီလောက် ယုံလွယ်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး... ခုတော့ သူတို့က Organizer agent Prooflabel လေ... ဒီ Event ကို စီစဉ်တဲ့ ဒီလို အဖွဲ့အစည်းမျိုးအနေနဲ့ ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို နောက်ဆုံးအချိန်မှ သူတို့စကားသူတို့ ပြန်စားပြီး ပြောင်းလိုက်မယ်လို့ မထင်ထားမိဘူး...
ကဲဒါဆိုရင် တန်းစီတာက ညသန်းခေါင် ၁၂ နာရီတည့်တည့်စစီလို့ရတာက ထားပါတော့... လက်မှတ်ကတော့ ၉ခွဲမှရောင်းမှာဆိုတော့ ငါသွားစီရင် မှီနိုင်ဦးမလားလို့ မျှော်လင့်မိသေးတယ်... မနက် ၅နာရီလောက် ဘတ်စ်ကားတွေစထွက်တာနဲ့ ငါသွားမယ်ပေါ့... ဒါပေမဲ့ ခြေတုံချတုံပဲ... စိတ်ထဲမှာသိနေတယ်... ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင်တော့ သိပ်တော့ မမျှော်လင့်ရဲဘူး... မနက် ၅နာရီကြီး အဖေဆူတာခံပြီးထွက်သွားပြီးတော့မှ လက်မှတ်လဲမရ လူလဲပင်ပန်းရကြိုးမနပ်ဖြစ်ပြီး အိမ်ပြန်လာလဲ ထပ်ဆူခံရအုံးမယ်ဆိုတော့ အခြေအနေလေးကို အွန်လိုင်းကနေ ၅နာရီမထိုးခင် အသာစောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်....
အဲဒိမှာတင် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်က သူတို့ဆိုဒ်မှာ ကွန်မန့်တွေနည်းတာမဟုတ်ဘူး တက်နေတာ... ဆဲတဲ့ကွန်မန့်... မကျေမနပ် ကွန်ပလိန့်လုပ်တဲ့ကွန်မယ်က ၉၅%လောက်ရှိတယ်... ကျွန်မလိုပဲ ခံရတဲ့သူတွေက ဘယ်ကျေနပ်မလဲ... ကျွန်မတောင် နဲနဲတော့ ၀င် အပြစ်တင်လိုက်သေးတယ်... ဟုတ်တယ်လေ သူတို့လို အဖွဲ့အစည်းနဲ့လူတွေက နောက်ဆုံးအချိန်ကျမှာ သူတို့ ကြေညာချက်ကို ပြောင်းတယ်ဆိုတာ ဘယ်ကောင်းမလဲ... အစထဲက ငါတို့ကတော့ overnight Queue ကို ခွင့်ပြုတယ်.. လက်ခံတယ်ဆိုလို့ကတော့ ကျွန်မလဲ ၂ရက်လောက်စောပြီး အော့ချက်လမ်းမှာ Camp ထိုးပြီးသွားနေမှာပေါ့... ခုတော့ သူတို့က အစကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၄ရက်နေ့မနက် ၉နာရီခွဲမှပဲ စပြီး တန်းစီရမယ်ကြေညာထားတော့ ကိုယ်လဲ အေးဆေးမိတာပေါ့...
ကွန်မန့်တွေထဲမှာ အဲဒိကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကလဲ ပါသွားတဲ့ Iphone တွေ laptop တွေနဲ့ အခြေအနေကို တင်ပေးနေတယ်... အဲဒိမှာလူ အယောက်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ရောက်နေတယ်ဆိုပဲ... HMV Mall ထဲမှာ မဆန့်လို့... အော့ချက်လမ်းမပေါ်မှာပဲ Barrier တွေကာပြီး စီခိုင်းတယ်တဲ့... အဲဒိမှာလဲ အစီအစဉ်တွေက ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး လူအုပ်ကို မနိုင်ဖြစ်နေပုံရတယ်... နောက်တော့ အဲဒိလူတွေကို Queue no. တိုကင်တွေလိုက်ပေးတယ်တဲ့... ပြီးတော့ တိုကင်နံပါတ်ကို အစဉ်လိုက်မသွားပဲ မဲဖောက်ပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လို့ အဲဒိရောက်နေတဲ့လူတွေနဲ့လဲ ပြဿနာတော့ ဖြစ်ကြပုံရတယ်...
"ငါတိုကင်အမှီသွားယူရင်ကောင်းမလား" ကျွန်မလဲ ကိုယ့်အခန်းထဲက ကွန်ပြူတာခုံရှေ့မှာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိခြေတုံချတုံဖြစ်နေတုန်း... ကွန်မန့်တွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု scroll down လုပ်ဖတ်ရင်းနဲ့... ကွန်မန့်တစ်ခုမှာ တိုကင်တွေက မနက် ၃နာရီခွဲထဲက ကုန်သွားပြီတဲ့... ဒီနေ့အတွက် တိုကင်ရှိတဲ့သူပဲ မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်... တိုကင်မရတဲ့သူတွေက မျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိတော့ဘူးတဲ့... တိုကင်ရတဲ့သူတောင် လက်မှတ်ရမရ အာမခံချက်မရှိသေးဘူး.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ အားလုံးလိုချင်တဲ့ VIP standing ticket S$258 တန်က လူပေါင်း ၁၅၀၀ ကိုပဲရောင်းမှာ... ထိုင်ခုံနဲ့အတန်း S$258 တန်က လူပေါင်း ၂၂၀၀... ဒုတိယတန်းက SEATED S$218
တတိယတန်းက SEATED S$168 နဲ့ နေက်ဆုံးတန်းက SEATED S$ 118. စုစုပေါင်း ပရိတ်သတ် လူဦးရေ ၁သောင်းနီးပါးရှိတဲ့ ကိုရီးယားအဆိုတော် ရှိုးပွဲ... ဒါတောင် လက်မှတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့...
ရာကျော်ပေးရပြီး တော်ရုံတန်ရုံဘယ်သူက အဝေးကြီးကကြည့်ချင်မလဲ... ဒီတော့ ဈေးအကြီးဆုံးတန်းကို လုကြတာပေါ့... ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မလဲ လက်လျှော့လိုက်ပြီး ကွန်မန့်တွေပဲ သူတို့ ဆိုဒ်မှာဝင်ရေး... သူများတွေပြောထားတာကိုယ်ထောက်ခံရင် like သွားလုပ်... ကိုယ့်ကွန်မန့်တွေဆိုလဲ ရေးပြီးတာနဲ့ သိပ်မကြာဘူး Like လာလုပ်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်... ပြီးတော့ မကြာပါဘူး... သူတို့ ဆိုဒ်ပေါ်က ကွန်မန့်တွေမှာ Black market ကြီးတစ်ခုပေါ်လာပါတော့တယ်... တိုကင်ပြန်ရောင်းစားတဲ့သူနဲ့... လက်မှတ်ကို မတန်တဆပြန်ရောင်းတဲ့သူနဲ့... လူတစ်ယောက်ကို ၁၀စောင် အများဆုံးဝယ်လို့ရတယ်လေ... ဒီတော့ ပိုဝယ်ပြီး ပြန်ရောင်းကြတာပေါ့... ဒါလဲ ပြန်ဝယ်တဲ့သူက ၀ယ်နေတာပဲ... ကျွန်မကတော့ သူတို့ရဲ့ Management ညံ့ဖျင်းမှုနဲ့ ကတိမတည်မှုကြောင့် အဲဒိ အေးဂျင့်ကို အားပေးချင်စိတ်ကို မရှိတော့ဘူး... အဆိုတော်တွေလာရင်တောင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုံခြုံရေးချပေးပါ့မလား မသိဘူး... G-Dragon လေးတစ်ခုခုဖြစ်ရင်တော့ ဒင်းတို့... ဟင်း... ဟင်း.....
ဒီလိုနဲ့ပဲစိတ်လျော့လိုက်တယ်... အစထဲကလဲ အဆိုတော် ၆ဖွဲ့မှာ ကိုယ် Crazy ဖြစ်တာက ၁ဖွဲ့ပဲပါတာ... အခွင့်အရေးလွတ်မှာစိုးလုိ့သာ ၀ယ်မယ်စိတ်ကူးတာ... ခုတော့ လုံးဝ စိတ်ပြတ်သွားတာပေါ့... ဒီပုံအတိုင်းဆို လေယဉ်ကွင်း info တောင် ထွက်ပါ့မလားမသိဘူး... အားလုံးက လေယာဉ်ကွင်းကို မဲကြမှာပဲ... ဒီတော့ သတင်းထွက်ရင်တောင် အမှားဖြစ်ဖို့များတယ်... ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ သွားကြည့်ရမှာပဲ... G-Dragon လာရင် ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်မယ်လို့ ဖေ့ဘွတ်မှာ ကြွေးကြော်ထားဖူးတယ်... ကိုယ့်ကြွေးကြော်သံကို နတ်တွေကြားလို့ ခုလို သူလေးရောက်လာတာ... ရှိုးပွဲကတော့ ဒီတစ်ခေါက်မကြည့်ရလဲ ကိစ္စရှိဘူး... စကာင်္ပူမှာ သူတို့ ဈေးကွက်ရှိမှန်းသိရင် နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာမှာပဲ... အဲဒိတော့မှ Big Bang ချည်းပဲရှိုးကို သွားကြည့်မယ်...
၅ရက်နေ့က newpaper သတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ ၄ရက်နေ့က လက်မှတ်ဝယ်တဲ့သတင်းပါလာပါတယ်တဲ့.... ရှာဖွေကြည့်တော့ အဲဒိနေ့က ကိုယ်မသွားလိုက်တာပဲ ခပ်ကောင်းကောင်းရယ်ပါ... မူးလဲတဲ့လူလဲလို့ Ambulance တောင် Stand by လုပ်ထားရတယ်တဲ့... ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကလဲ အသက်ရှုကြပ်တဲ့ ရောဂါဖြစ်လို့ မောထဲမှာ နားဖို့ ရဲတွေကပြောတာကို သူ့နေရာပျောက်မှာစိုးလို့ မနားဘူးဆိုပြီး ငြင်းခဲ့တယ်ဆိုပဲ...
လူတစ်ယောက်ကလဲ " ကျွန်မ/ကျွန်တော်က ရှေ့နားရောက်နေတာ... နောက်ကလူတွေက တအားတွန်းတဲ့အခါ ကိုယ့်မှာရှိသမျှအားအကုန်နဲ့ Barrier နဲ့ နောက်ကလူအုပ်ကြားမညပ်သွားအောင် မနည်းတောင့်ခံနေခဲ့ရတယ်" လို့ပြောခဲ့တယ်..
Fan တစ်ယောက်ကလဲ "ကျွန်တော်/မ က ကြာသပတေးနေ့ထဲက ဒီမောထဲမှာ လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ လာနေနေတာ ဒါပေမဲ့ နောက်တော့ လူတစ်ဦးကို ၁၀စောင်ဝယ်ခွင့်ရှိတယ်ကြားတော့ တော်တော်လေး ဒေါသဖြစ်ခဲ့ရတယ်..." မကျေမနပ်ပြောကြားခဲ့တယ်...
အင်းပေါ့လေ... ဒီတစ်ခါလာမှာက ကိုရီးယားထိပ်သီး အဆိုတော်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့အပြင် မိန်းကလေးအဆိုတော်အဖွဲ့လဲပါတော့ ယောကျာင်္းလေးပရိတ်သတ်နဲ အပြိုင်လိုက်တိုးရင် ကိုယ်က အားနည်းနေမှာ.... ဒီတော့လဲ အဲဒိနေ့က မသွားလိုက်တာ ခပ်ကောင်းကောင်းရယ်... အဲဒိ VIP standing လက်မှတ်ရတဲ့သူတွေက တကယ့်ရှိုးနေ့ကျရင်လဲ စင်နဲ့ အနီးဆုံးမှာနေရာရအောင် ထပ်ပြီး overnight queue နဲ့ တန်းစီကြမှာကိုလဲ မြင်ယောင်နေသေးတယ်... တကယ်လို့ ကျွန်မသာ လက်မှတ်ရခဲ့မယ်ဆိုလဲ ပေါက်တဲ့ နဖူးမထူးဆိုသလို နောက်ရက်ပါ အလုပ်တွေခွင့်ယူပြီး overnight မဲ့ အရေးတွေးပြီး ခုလို လက်မှတ်မရခဲ့တာပဲ... ဖြစ်သမျှ အကြောင်း အကောင်းလို့ပဲ မှတ်ယူလိုက်ပါတော့တယ်...
Photos and Some info source from www.allkpop.com
Posted by mabaydar at 11:34 PM2comments :
Labels: Activities , Celebrities , ဗေဒါ့အကြောင်း